Barre Hiiraale: Dagaalku waa nagu waajib – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Barre Hiiraale: Dagaalku waa nagu waajib
6th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Hogaamiyaha sida weyn uga soo horjeeda maamulka Juba, Col. Barre Hiiraale oo deegaanka Goobweyn oo banaanka ah Kismaayo tababar ugu soo xiray maleeshiyo beeleed isaga taageersan, kuna heyb ah ayaa sheegay inuu weerarayo Kismaayo oo sanad ka hor ay ka saareen ciidamada Axmed Madoobe iyo ciidamada Kenya.
Barre Hiiraale oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in ciidamada uu tababarka u xiray ay diyaar u yihiin dagaal ay ku qaadaan Kismaayo, wuxuuna ku dooday in dagaal iyaga waajib ki yahay maadaama sida uu yiri guryahooda laga saaray.
“Ciidan haddii tabar lo xiro looguma talagelin inuu qur’aan aqriyo, waajibkiisa auu gudanayaa, muddo hal sano ayaan guryaheenii ka maqanahay, marka dagaalku waajib ayuu nagu yahay” ayuu yiri Barre Hiiraale.
Afhayeen u hadlay kooxda Barre Hiiraale oo lagu magacaabo Xasan Qaasim Warsame, ayaa isaguna sheegay in ay diyaar u yiiin sidii ay ula dagaalami lahaayeen ciidanka Kenya ee ku sugan Kismaayo.
Waxa uu sheegay afhayeenku in ay ladagaalamayaan ciidanka Kenya maadaama dhib weyn ay ku hayaan sida uu yiri bulshada Jubbooyinka. Isagoo xusay in awoodooda ay tahay mid ku filan weeraro ay ku qaadaan ciidanka Kenya.
Shalay galab ayaaba dagaal ka dhex qarxay ciidamada maamulka Juba ee Axmed Madoobe hogaamiyo iyo maleeshiyaadka Col. Barre Hiiraale, waxaana saaka wararka ka imaanaya Kismaayo sheegayaan in labada dhinac is horfadhiyaan.
Obama oo balaayiin dollar u ballanqaaday Afrika